Archdiocese of Mandalay blog: မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၇)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၇)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၆)
Fr.Paul abbona (oblates)
သြဘလိပ် အသင်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဖါသာရ် အဘိုနာနှင့် ဖါသာရ်ဗင်းဆင်း ဗရူးနို တို့သည (၁၈၄၀) ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ ခဲ့ကြသည်။ လမ်းခရီးတွင် ခက်ခက် ခဲခဲ လာခဲ့ကြရသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရပ်မြို့သို့ ရောက်သောအခါ မကြာခင်က (Vicar Apostolate) ၁
ခန့်ထားခြင်း ခံရသော ဆရာတော်ကြီး ကာရူးက (Carew) ပျူငှါစွာ ကြိုဆို လက်ခံသည်။ ဆရာတော်ကြီးနှင့် သူ၏ သာသနာပြုများသည် အင်္ဂလိပ် စကား တတ်ကျွမ်းသော်လည်း ပေါ်တူဂီ စကား မတတ်ကျွမ်းသဖြင့် မဒရပ်ရှိ ကက်သလစ် ဘာသာဝင် ပေါ်တူဂီများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အခက်အခဲ ရှိသည်။ ပေါ်တူဂီ ဘုန်းကြီးများကလည်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား မတတ်ကျွမ်း ကြပေ။ ဆရာတော်ကြီးသည် ဖါသာရ် အဘိုနာအား မဒရပ်မြို့တွင် မိမိနှင့် အတူ သာသနာပြု လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် နေရစ်စေပြီး၊ ဖါသာရ် ဗင်းဆင်း ဗရူးနိုးကို စရိတ်ပေးပြီး ရန်ကုန်သို့ ဆက်လက် သွားစေသည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် ပေါ်တူဂီ စကား ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သဖြင့် မဒရပ်ရှိ ပေါ်တူဂီ ဘာသာဝင်များ ကြည့်ရူရာတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီးက ဖါသာရ် အဘိုနာအား မဒရပ်တွင် ဆက်လက် နေခွင့်ပြုရန် ဌာနချုပ်သို့ ၄င်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာတော်ကြီး ကာအိုထံ ၄င်း၊ စာရေး၍ တောင်းခံသော်လည်း မရရှိသဖြင့် ဖါသာရ် အဘိုနာသည် မဒရပ်မှ ရန်ကုန်သို့ သင်္ဘောဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ရာ (၁၈၄၀) ခု သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ သု မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ဆရာတော်ကြီး ကာအို ရောမသို့ သွားနေသည်။ မော်လမြိုင်နှင့် ရန်ကုန်တွင် ဖါသာရ် တာရိုလီ ဖါသာရ်စတောက်တို့နှင့် လ အနည်းငယ် နေထိုင်ခဲ့ပြီး အထက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရသည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာနှင့် ဖါသာရ် ဗာတစ်လီတို့ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း သာသနာသို့ ရောက်သောအခါ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီက ချမ်းသာရွာ၊ မုံလှ၊ ချောင်းရိုး၊ ဖါသာရ် ဗာတစ်လီက နဘက်နှင့် ချောင်းဦး၊ ဖါသာရ် အဘိုနာက မင်းနေပြည်တော် အမရပူရကို ကြည့်ရှု့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြောက်ပိုင်း သာသနာ၌ ကက်သလစ် ဘာသာဝင် ဦးရေ တစ်ထောင်ခန့် ရှိသည်။
(၁၈၄၃) ခု ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီနှင့် ဖါသာရ် အန်ဒရီ အာနိူ၊ ဦးပဉ္စင်းကြီး ပိုဂိုလိုတီ၊ ဦးပဉ္စင်းကြီး ဂါဘူတီ၊ ကိုရင် တက်ဆီအို၊ ရပ်ဖိဂ်နန်နှင့် အိုပါတီတို့ ရန်ကုန်မှ အင်းဝသို့ ထွက်ခွာ လာခဲ့သည်။ ဧပြီလ (၁၅)ရက် စနေနေ့ကြီးတွင် ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။ မေလတွင် ပြည်မြို့မှ ထွက်ခွာ လာကြပြီး အင်းဝ ရောက်သောအခါ ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီနှင့် အဖွဲ့ကို အမရပူရမှ ဖါသာရ် အဘိုနာနှင့် ခရစ်ယာန်များ တို့သည် လှေငယ်ဖြင့် အင်းဝသို့ လာရောက် ကြိုဆိုကြသည်။ အမရပူရတွင် ရက်အနည်းငယ် နေထိုင်ကြပြီး (၁၈၄၃) ခု မေလ (၂၁) ရက်နေ့တွင် ဒကာတော် အန်တိုနီ ကာမေရတာ၏ လှူဒါန်းငွေဖြင့် တည်ဆောက် ထားသော စိန်ပီတာဘွဲ့ခံ အုတ်ဘုရားကျောင်းကို ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီနှင့် ဖါသာရ် အဘိုနာ၊ ဖါသာရ် အန်ဒရီအာနို၊ ဦးပဉ္စင်း ပိုဂိုလိုတီနှင့် ဂါဘူတီ၊ ကိုရင် အိုပါတီ၊ တက်ဆီအိုနှင့် ရပ်ဖိဂနန်တို အတူပါဝင်၍ ဘုရားကျောင်း ကောင်းချီးပေး မစ္ဆားပူဇော်ပွဲ ကျင်းပသည်။ ဘုရားကျောင်း တကာ ကာမေရတာ၏ မိသားစုနှင့် အခြားဘာသာဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။ ၂
ဖါသာရ် အဘိုနာ မဒရပ်မှာနေစဉ် မဒရပ်မှ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော ကျောက်ကုန်သည် တစ်ဦးရှိသည်။ ထုိုသူသည် အာမေးနီးယား လူမျိုး၊ အာဗာနီ(Avanis) ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော်လည်း သာမန် ဆင်းရဲသား ပုံစံမျိုးနှင့် နေထိုင်သည်။ ဘုရားတရား ကြည်ညိုသူလည်း ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ပေါ်တူဂီ စကား မတတ်ကျွမ်းသဖြင့် ထိုသူ၏ အိမ်သို့ ဖါသာရ် အဘိုနာကို သွားရောက် လည်ပတ်စေသည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် အိုအာမေးနီးယား အာဗာနီနှင့် ခင်မင် ရင်းနှီးသွားသည်။ ထိုသူကား ဘုရားကျေုာင်းအတွက်နှင့် အီတလီ သာသနာပြုများ အတွက် လှူဒါန်းလိုကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် မြန်မာဘုရင် မင်းတုန်းမင်းက စေလွှတ်သဖြင့် (၁၈၅၆) ခုနှစ်တွင် ရောမမြို့သုိ့ သွားသောအခါ မဒရပ်ရှိ ကျောက်ကုန်သည် အဘာနီနှင့် ၀င်ရောက် တွေ့ဆုံပြီး အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်ပွဲအပြီး သာသနာအတွက် အကူအညီများ လိုအပ်ကြောင်း ပြောပြသည် ထိုအခါ အာမေးနီးယန်းက ရန်ကုန် ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အတွက်နှင့် သာသနာပြုများ အတွက် ငွေများ လှူဒါန်း လိုက်သည်။ ၃
ဖါသာရ် အဘိုနာ အမရပူရမှာ နေစဉ် ဘုရင်၏ ဦးစားပေးခြင်း ခံရသည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာအား ဘုရင်က မကြာခဏ ခေါ်ယူ၍ ဆေးပညာနှင့် နက္ခတ်ပညာ ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာ ဘာသာရပ်များကို ရှင်းလင်း ပြစေသည်။ တချို့ အချိန်များမှာ ဘုရင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ပုဏ္ဏားတော်များနှင့် နေကြတ် လကြတ်ခြင်းများ ဆွေးနွေးစေခဲ့ရာ ထင်ရှား ခဲ့သည်။ သာယာဝတီမင်းတွင် သမီး တစ်ယောက်ရှိသည်။ နောင်တွင် မင်းတုန်းမင်း၏ မိဖုရားဖြစ်သည်။ သာယာဝတီမင်း၏ သမီးတော်သည် နက္ခတ္တဗေဒ ဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာ ဘာသာရပ်ကို လေ့လာနေသူ ဖြစ်သည်။ ဘုရင်က ဖါသာရ် အဘိုနာအား သမီးတော်ကို နက္ခတ် ပညာရပ် ကူညီ သင်ကြား ပေးစေလိုသည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာကလည်း ဘုရင်ကို ငြင်းဆန်မှု မပြုဘဲ လိမ္မာ ပါးနပ်စွာဖြင့် မြန်မာ ဘာသာတတ်ကျွမ်းသော နက္ခတ် ပညာရှင်များကို ကျွန်ုပ်တို့ သာသနာပြုများ နေထိုင်ရာ ကျောင်းသို့ စေလွှတ် လေ့လာပြီး ဘုရင်၏ သမီးတော်ကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းပြခြင်းက ပို၍ လွယ်ကူ ရှင်းလင်းပြီး အကျိုးရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြု လျောက်ထားခဲ့သည်။ ဘုရင်က ပြုံးတော်မူ၍ သင်၏ အကြံအစည် အလွန် သင့်မြတ် လှပေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး၏ ကျင့်စဉ်နှင့် ညီညွှတ် ပါပေသည်။ အမြော်အမြင် ရှိပါပေသည်ဟု ချီးကျူးခဲ့သည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် သတိ ၀ိရိယနှင့် အမြော်အမြင် ရှိစွာ ဘုရင်ကို ကျေနပ်အောင် လျှောက်ထားနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဘုရင်သည် နက္ခတ်ပညာရှင်များအား ဖါသာရ် အဘိုနာကျောင်းသို့ သွားရောက် လေ့လာကြရန် အမိန့်ထုတ်သည်။ နန်းတွင်း လူငယ် တစ်ချို့ကိုလည်း ဖါသာရ် အဘိုနာထံ သွားရောက်၍ လမ်းညွှန်မှု ခံယူရန် စေလွှတ်ခဲ့သည် ထိုလူငယ် တချို့ သည် (၁၈၇၇) တွင် နိုင်ငံတော်၏ အရေးပါသော ရာထူးများ ရရှိကြသည်။ ၄
ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ် (၁၈၅၂) ခုနှစ်တွင် လက်ရှိ ဘုရင်သည် ထီးနန်းကို ကာကွယ်ထားသည်။ အမရပူရကို စစ်သား မင်းလောင်းများက လုယက် ဖျက်ဆီး မီးရှို့ကြသည်။ အမရပူရတွင် နေသော ဖါသာရ် အဘိုနာအားလည်း သတ်ပစ်မည်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ခြိမ်းခြောက် ခံရသည်။ နောက်တက်လာသော ဘုရင်သည် ဖါသာရ် အဘိုနာအား ယခင် အခြေအနေအတိုင်း သာသနာပြုခွင့် ပေးခဲ့သည်။ (၁၈၅၇) ခု ဦးပိုင်းတွင် ဘုရင့် ပုဏ္ဏားတော်များ၏ လျှောက်ထားချက် အရ ခရစ်ယာန်များ အားလုံး မန္တလေးသို့ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ရန် သန္ဒိဌာန် ချခဲ့သည်။ ၅
မင်းတုန်းမင်းသား ဘုရင်အဖြစ်သို့ မရောက်မီ နောင်တော် ပုဂံမင်းကို တပ်များနှင့် တိုက်ခိုက်ကြစဉ်မှာပင် ကုလားဝန်မင်းခေါင် သီဟသူ၊ အမြောက်ဝန် မင်းလှ သီရိမင်းထင်တို့နှင့် အတူ သာသနာပြု အီတာလျံ ဘုန်းတော်ကြီး ဒိုမင်ဂိုတာရိုလီနှင့် ပေါလို အဘိုနာတို့ကို အင်္ဂလိပ် ဗိုလ်ချုပ်မင်းနှင့် ၀န်ရှင်တော် မင်းကြီးတို့ထံ မင်းတုန်းမင်းသားက စေလွှတ်၍ တပ် အချီအတက် မရှိ ရှေးအထက်ကကဲ့သို့ မဟာမိတ်ဖြစ်လိုကြောင်း နှင့် စစ်ပြေငြိမ်းရေး ဆိုစေသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် (၁၈၅၃) ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ (၁၉)ရက် နေ့တွင် ဗြိတိသျှ စစ်စခန်းသို့ ရောက်ရှိကြလေသည်။ မင်းတုန်းမင်း ဘုရင် ဖြစ်ပြီးသောအခါ ယင်းအဖွဲ့ကို အင်္ဂလိပ်တို့ထံ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ စေလွှတ်ပြန်သည်။ (၁၈၅၃) မတ်လ (၂) ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ပြည်မှ တဆင့် ချီတက်၍ မြေထဲမြို့ကို သိမ်းပိုက်ပြီး ဖြစ်နေလေပြီ။ ပုဂံမင်းနှင့် မင်းတုန်းမင်း ထီးနန်း အပြောင်းအလဲကြောင့် ဗြိတိသျှ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်း လိမ့်မည်ဟု အီတာလျံ ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် တာရိုလီက မိုက်မဲစွာ စိတ်အား တက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အကယ်၍ မင်းတုန်းမင်း၏ အဆိုပြုချက်များ အောင်မြင်ပါက ကက်သလစ်ဂိုဏ်း အတွက် သာသနာပြုရန် အခွင့်အလမ်း ပိုကောင်းပြီးလျှင် ပြိုင်ဘက် အမေရိကန် နှစ်ချင်း ခရစ်ယာန် သာသနာပြုများကို မောင်းထုတ် နိုင်လိမ့်မည်ဟု အီတာလျံ ဘုန်းတော်ကြီးများက မျှော်လင့် ကြဟန်တူကြောင်း ကက်ပတိန် ဖယ်ရာက ထင်မြင် ယူဆခဲ့သည်။ ၆
မင်းတုန်းမင်း ထီးနန်း ရရှိပြီးနောက် ဖါသာရ် အဘိုနာအား လစဉ် ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးခဲ့သည်။ ပထမပိုင်းတွင် ထောက်ပံ့ငွေ နည်းသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တိုးပေး ခဲ့သည်။ တခါတရံ ထောက်ပံ့ငွေ မပေးသည့် အခါလည်း ရှိသည်။ ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက် မန္တလေးသို့ လာရောက်သော အခါတွင်လည်း
ခရီး စရိတ် ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဆရာတော် ဘီဂန်းဒက် ကုန်းကြောင်း ခရီးသွားသောအခါ အသုံးပြုရန် ဆင်တော်များနှင့် ရေကြောင်း ခရီးအတွက် လှေတော်များ ပေးသနားခဲ့သည်။ ရန်ကုန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ခေါင်းလောင်းစင် အတွက် ကျွန်းသစ်များ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့သို့ လာရောက်သော သာသနာပြုများ ကိုလည်း ခရီး စရိတ်များ ထောက်ပံ့လေ့ ရှိသည်။ ၇
ဖါသာရ် အဘိုနာသည် (၁၈၅၇) ခုတွင် အမရပူရမှ မန္တလေးသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ မင်းတုန်းဘုရင်က မြေနှစ် နေရာ ပေးသနားခဲ့သည်။ ယင်းမြေ(၂) နေရာမှာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု လမ်းခြားလျက်ရှိသည်။ လမ်း၏ အနောက်ဖက် မြေကွက်မှာ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်း ဆောက်ရန် ဖြစ်ပြီး လမ်း၏ ရှေ့ဘက် အကွက်မှာ ဘာသာဝင်များ နေရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရင်က ဘုရားကျောင်းဆောက်ရန် ငွေတော်များလည်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၈
ဖါသာရ် အဘိုနာသည် အနောက်ဘက် အကွက်တွင် သာသနာပြုများနေရန် ကောင်းမွန် လှပ ခန့်ငြား ထည်ဝါသော အဆောက်အဦးကြီး တစ်ခု ဆောက်လုပ်သည်။ ယင်း အဆောက်အဦး၏ တစ်ပိုင်းကို ဘုရားကျောင်း မပြီးမီ ဘုရားဝတ်ပြုရန် အတွက် ဘုရားကျောင်း အဖြစ် (၁၈၆၃)ခု အထိ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် အမရပူရတွင် ကျန်ရစ်သော စိန်ပီတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အစား ယင်း မြေကွက်ပေါ်မှာ အခြေခံ ခိုင်မာ တောင့်တင်းအောင် အုတ်မြစ်ချ၍ မြေပေါ်တွင် အမြင့် လေးပေ အုတ်ခုံခံလျက် စိန်ပီတာဘွဲ့ခံ သစ်သား အုတ်ကြွပ်မိုး ဘုရားကျောင်း တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဘေးပတ်လည်တွင် ၀ရံတာ ကာထားသည်။ ဤကျောင်းကို (၁၈၆၃) ခု ဧပြီလတွင် ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက်က ကောင်းကြီးပေး သာဓု ခေါ်သည်။ ၉
စိန်ပီတာ ဘုရားကျောင်းသည် (၁၈၉၁) ခုနှစ် အထိ တည်ရှိခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီး ဆိုင်မွန် လက်ထက် ကျောင်းတကာ၊ တကာမ ဦးဖိုးနှင့် မာဒလေနားတို့၏ အလှူငွေဖြင့် ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဆောက်လုပ်သော အခါ ပထမဆုံး ဆောက်လုပ်ခဲ့သော စိန်ပီတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟောင်းအား မန္တလေး ဆေးရုံကြီး အနီး တမီးလူမျိုးတို့ နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်သို့ ဖျက်ယူခဲ့၍ စိန်ဖရန်စစ်ဇေးဗီးယားဘွဲ့ အမည်ခံ ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၀ (မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင် ပထမဆုံး တည်ဆောက်သည့် အထက် ဖေါ်ပြပါ စိန်ပီတာ ဘုရားကျောင်းနေရာသည် မန္တလေးမြို့၊ ၈၂လမ်း၊ ၂၄ x ၂၅ ကြား စိန်ဂျိုးဇက် ကွတ်ဗင့်ကျောင်းယ္ခု အမှတ် (၈) အမျိုးသမီး အထက်တန်းကျောင်း နေရာ ဖြစ်သည်။)
ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူခဲ့သူ မော်လမြိုင်မြို့သား ပေါ်တူဂီ ကပြား ဂျိုအန်နက်စ်ပါကင်း (Joanes Pakins) အား (၁၈၆၉)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက်မှ အဆိုပါ စိန်ပီတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ရဟန်း သိက္ခာ တင်ပေးခဲ့သည်။
ထို မြေကွက်နေရာတွင် ဒေသခံ ဆရာမကြီး ချယ်ရူဘီနာ အုပ်ချုပ်သော မြန်မာစာ အဓိက သင်ကြားပေးသော မိန်းကလေး စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိသည်၊ ဤကျောင်းတွင် မိဖမဲ့ မိန်းကလေး အချို့ ဘော်ဒါ နေကြသည်။ ကျောင်း အဆောက်အဦး ကျဉ်းမြောင်း၍ မိန်းကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိ၊ အဆောက်အဦးမှာ အုတ်ကျောင်း ဖြစ်သော်လည်း အခန်း (၃)ခန်းသာ ပါသည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် ရန်ကုန်မှ ရောက်ရှိလာမည့် သီလရှင် (၃) ပါး နေရာ ထိုင်ခင်းအတွက် အဆောက်အဦးကြီးကြီး တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤ အဆောက်အဦးသည် ကျဉ်းသည့် အတွက် သီလရှင်များနှင့် ကျောင်းသူများ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း လုံလုံလောက်လောက် နေထိုင်နိုင်ရန် အုတ်ဖြင့် နှစ်ထပ်တိုက် အဆောက်အဦးကို ထပ်မံ ဆောက်သည်။ ယခင် အဆောက်အဦးကို ဘော်ဒါများ၊ အိပ်ခန်း၊ စားသောက်ခန်းနှင့် အခြား အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ (၁၈၆၆) တွင် စိန်ဂျိုးဇက်သီလရှင် (The order of St. Joseph of the apparition) နှစ်ပါး ရောက်ရှိလာသည်။ ယင်း သီလရှင်နှစ်ပါးမှာ စစ္စတာ ထရီဇားနှင့် စစ္စတာ ဆိုဖီတို့ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စာသင်ကျောင်း စတင် ဖွင့်လှစ်ကြသည်။ မိဘမဲ့ ကလေးများကို ဥရောပ သီလရှင် နှစ်ပါးနှင့် တိုင်းရင်းသား သီလရှင် နှစ်ပါးတို့က တာဝန်ယူ ကြည့်ရူကြသည်။ သီလရှင် နှစ်ပါး ရောက်လာပြီးနောက် ဖါသာရ် အဘိုနာ၏ အကူအညီဖြင့် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာသင်သော စာသင်ကျောင်း ဖြစ်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင် မန္တလေး၌ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာသင် ပေးသော စာသင်ကျောင်း မရှိသေးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ဟိန္နူဘာသာဝင်များ၊ အစ္စလန် ဘာသာဝင်များ၊ တရုတ်များနှင့် ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံမှ ကလေးများ လာရောက် အပ်နှံ ထားကြသည်။ ကနောင်မင်းသာကြီးကလည်း ကျောင်း အဆောက်အဦး အတွက် ငွေကျပ် နှစ်ထောင် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ (၁၈၆၆) ခုနှစ်တွင် နန်းတွင်း ပုန်ကန်မှု ဖြစ်၍ ဖါသာရ် အဘိုနာနှင့် သီလရှင် (၃)ပါးတို့သည် ရန်ကုန် ပြန်ကြသည်။ (၁၈၆၇) ဇန္န၀ါရီလ (၂၅)ရက်နေ့ကျမှ မန္တလေး ပြန်ရောက်ကြပြီး လုပ်ငန်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ၁၂
ဖါသာရ် အဘိုနာသည် မင်းတုန်းမင်းကြီး၏ ယုံကြည်ထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှနှင့် စာချုပ်တိုင်း ဖါသာရ် အဘိုနာထံ အကြံ တောင်းရသည်။ မြန်မာနှင့် အီတလီစာချုပ်မှာ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် အရေးပါသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာ၏ အကူအညီဖြင့် အီတလီနိုင်ငံသို့ ဗမာ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ် နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်၏ ခရီးစရိတ်ဖြင့် ဥရောပသို့ (၂)ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့သည်။ န၀မမြောက် ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး ပီဦးထံသို့ မင်းတုန်းမင်း ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာကို ဆက်သခဲ့သည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာသည် (၁၈၇၄) ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် အီတလီ၌ ပျံလွန် တော်မူသည်။ ၁၃
၁။ The Voice,May, 1926,PP.121-131
၂။ The Voice,June, 1926,PP.157-161
၃။ The Voice,May, 1926,PP.126-131
၄။ The Voice, Oct, 1926, PP. 265-269
၅။ Vivan Ba, April, 1963, P-20
၆။ အခြေပြမြန်မာနိုင်ငံရေး သမိုင်း၊ ဒုတိယတွဲ၊ ပထမပိုင်း၊ စာမျက်နှာ -၂၁၈-၂၁၉
၇။ Bigandet catholic Burmese Mission. P-73
၈။ Mandalay District Gazeeteer, P-175
၉။ Bigandet catholic Burmese Mission. P.66
၁၀။ Mandalay District Gazeeteer, p.175
၁၁။ The voice, April, 1926
၁၂။ (က) Bigandet catholic Burmese Mission,PP.66-67 (ခ) The voice,v 12 Dec 1916,PP.283-6
၁၃။ Vivian Ba, April, 1963, PP.20-21
Fr. Francis Bartelli (Oblates)
ဆရာတော်ကြီး ကာအိုသည်(၁၈၃၉) ခုတွင် သာသနာပြု ရဟန်းသစ်များ ရရှိရန် မော်လမြိုင်မှ အီတလီသို့ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ အီတလီတွင် (၂)နှစ်ခန့် နေထိုင်ပြီး (၁၈၄၁) တွင် ဖါသာရ် ဘိုကာရိူ၊ ဖါသာရ် ဖရန်စစ်ဗာတစ်လီတို့နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တား ရောက်သောအခါ ဆရာတော်ကြီး ကာအို ခရီးဆက် မသွားပဲ အီတလီသို့ ပြန်လာရန် အသင်းချုပ်က ရေးလိုက်သော စာရရှိသဖြင့် ဆရာတော်ကြီးသည် အီတလီသို့ ပြန်ကြွ တော်မူသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါ ခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဘိုကာရိူမှာ မော်လမြိုင်တွင် ခေတ္တနေပြီး (၁၈၄၃) ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂလားသို့ ထွက်ခွါသွား၍ ပတ္တနာတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ဗာတစ်လီသည် အထက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွား၍ နဘက်၊ ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များ ကြည့်ရူ ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မော်လမြိုင်သို့ ပြောင်း၍ မော်လမြိုင်နှင့် တစ်မိုင်ခန့် ဝေးသော မရန်းကုန်းရှိ ဘာသာဝင်များကို (၁၈၅၆) ခု ကွယ်လွန်သည် အထိ ကြည့်ရူခဲ့ရသည်။ ၁
ဖါသာရ် ဗာတစ်လီသည် ပထမတွင် (Secular Priest) ဖြစ်၍ နောက်ပိုင်းတွင် သြဘလိပ် အသင်းဝင် ဖြစ်လာသည်။ ၂
(၁၈၄၃)ခုတွင် ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီသည် အထက် မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ရွာများသို့ လှည့်လည် ကြည့်ရူရသည်။ ပထမဦးစွာ အမရပူရမှ နဘက်ရွာသို့ လှေဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်နှင့် ဖါသာရ် အဘိုနာ၊ ဘရာသာရ် တက်ဆီအို၊ ဘရာသာရ် အိုပါတို့ လိုက်ပါ ခဲ့ကြသည်။ နဘက်ရွာသို့ ရောက်သောအခါ ဖါသာရ် ဗာတစ်လီနှင့် ဘာသာဝင် (၁၄၀) တို့က သောင်းသောင်းဖြဖြ အိုးစည် ဗုံမောင်းဖြင့် ကြိုဆိုကြသည်။ နဘက်ရွာတွင် ရက်အနည်းငယ် နေပြီး (၁၈) မိုင်ဝေးသော ချောင်းဦးသို့ ခရီး ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ချောင်းဦုးသို့ ဖါသာရ် ဗာတစ်လီပါ အတူ လိုက်ခဲ့သည်။ ချောင်းဦးရွာသည် ရွာငယ် (၁၀)ရွာ ပေါင်းထားသဖြင့် ဆယ်ရွာဟု ခေါ်ကြသည်။ ဤဒေသသည် အဆင့်မီသော စပါး အထွက်ကောင်းသဖြင့် စပါးရွာဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ အစောပိုင်း ကာလတုံးက ချောင်းဦးရွာတွင် ဘာသာဝင်များ နှစ်နေရာ ပျံ့နှံ့နေသဖြင့် ဘုရားကျောင်း နှစ်ကျောင်း ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ကျောင်းသည် မြောက်ပိုင်းတွင် ရှိ၍ ကျန်တစ်ကျောင်းမှာ တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ ယခုအခါတွင် ကညာစင်မာရီယားကို အလွန် ကြည်ညိုကြသဖြင့် မယ်တောသခင်မ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခံရသော ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း တခမ်းတနား ကျင်းပ ခဲ့ကြသည်။ နဘက် ဘာသာဝင်များ အုပ်စု ကြောင့်လည်း ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များ အားတက် ကြရသည်။ ပွဲတော် အခန်းအနားသို့ ဘာသာကွဲများလည်း အမြဲတမ်း လာရောက် ပါဝင်ကြသည်။ ပွဲတော် အခါသမယတွင် မိုးခေါင်သဖြင့် မိုးရေ လိုအပ်သော တောင်သူ လယ်သမား ဘာသာကွဲများသည်လည်း ခရစ်ယာန်များနှင့် အတူ စုပေါင်း၍ ဘုရားသခင်ထံ မိုးရွာပေးရန် ဆုတောင်းကြသည်။ တောင်းသည့် အတိုင်းလည်း မိုးရွာသွန်းသဖြင့် ဆုတောင်းပြည့် ကြသည်။ ဘာသာပများသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်းခိုး ကြီးမားပုံကို သိကြသော်လည်း ဘာသာဝင်ခြင်း မရှိကြပေ။ ဤကဲ့သို့ များပြားလှသော ခရစ်ယာန်များကို (၁၈)ရာစု နောက်ပိုင်း ဆင်ဖြူရှင်မင်း လက်ထက်ထိ ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ဆင်ဖြူရှင် မင်းတရားသည် ပြည်သူများ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသဖြင့် မကြာမီ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှုများ ပုန်ကန်မှုများ မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ခိုးသား ဓားပြ ထူပြော လာသည်။ လူဆိုး လူမိုက်များ မင်းမူ လာကြသည်။ ဤဒုက္ခမျိုးကို ခရစ်ယာန်များ ပါမက ဘာသာကွဲများလည်း ခံစား ကြရသည်။ ဤကဲ့သို့ တိုင်းပြည် မငြိမ်သက်မှု၊ ဘုန်းတော်ကြီး အရောက် အပေါက်နည်းမှု၊ ဘာသာကွဲတို့နှင့် အိမ်ထောင်ပြုမှု၊ ဘာသာကွဲတို့၏ ဓလေ့ ထုံးစံကို လိုက်နာမှုတို့ကြောင့် ချောင်းဦး မြောက်ပိုင်းရှိ ဘာသာဝင်များမှာ ဘာသာရေး ပေါ့လျော့ လာကြပြီး ဘုရားကျောင်းမှာလည်း ပျက်စီး သွားတော့သည်။ တောင်ပိုင်းရှိ ဘုရားကျောင်းမှာ ယနေ့တိုင် အထင်အရှား ရှိနေသေးသည်။ သို့သော်လည်း တောင်ပိုင်းဘုရားကျောင်းကို (၁၈၁၈)ခုနှစ်တုံးက ဘုန်းတော်ကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံက နှင်ထုတ်ခဲ့စဉ်အခါက ဗမာများ၏ ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရသည်။ နောက်ပိုင်း ဘုန်းကြီးများ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီး ဘုရင်၏ ဦးစားပေးခြင်း ခံရသောအခါ ရွာလူကြီး ဦးပြေသည် မိမိတို့ ဖျက်ဆီးခဲ့သော ဘုရားကျောင်းအတွက် ဘုရင်ထံ တိုင်ကြားမည်ကို ကြောက်သဖြင့် ဘုရားကျောင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ (၁၈၄၂) ခုနှစ်တွင် ဖါသာရ် ဗာတစ်လီသည် နဘက်နှင့် ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရန် ရောက်လာသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသည် ပျံ့နှံ့နေသော ဘာသာဝင်များကို တစည်းတလုံးတည်း အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် ဘုရားကျောင်း ကောင်းကောင်း ဆောက်လုပ်မှ ဖြစ်မည်ဟု သဘောပေါက်သဖြင့် အလှူငွေရရှိရန် ဖါသာရ် အဘိုနာနှင့် တိုင်ပင်ခဲ့သည်။ မကြာမီ အမရပူရမှ ကုသိုလ်ရှင် သြဂတ်စတင်း လင်ဇီအေဂို (ကျောင်းအမ မယ်တီ)က ဘုရားကျောင်း ဆောက်ရန် ဖါသာရ် ဗာတစ်လီအား ငွေကျပ် တစ်ထောင် လှူလိုက်သည်။ ဖါသာရ် ဗာတစ်လီသည် တနှစ်အတွင်း လှပသော ကျောင်းကို ဆောက်လုပ်သည်။ ဘုရားကျောင်းပြီးသောအခါ ဆရာတော်ကြီး နယ်လှည့် လာရင်း ဆရာတော်ကြီး ချယ်ရီတီ ကိုယ်တိုင် ဘုရားကျောင်း ကောင်းကြီးပေး သာဓု ခေါ်သည်။ ၃
၁။ Bigandet catholic Burmese Mission. P.30
၂။ The voice, May, 1926, PP.126-131
၁။ The Voice, July, 1926, PP.181-185
Fr. Ferdinand Andreino (Oblates)
တူရင်မြို့ သြဘလိပ်ခေါ် မာရီယား အသင်းဂိုဏ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အင်းဝနှင့် ပဲခူး သာသနာကို ဆက်လက် တာဝန်ယူရန် သဘောတူပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ချေရီတီကို စေလွှတ်ရန် ရွှေးချယ် ခန့်ထားလိုက်သည်။ ဖါသာရ် ချေရီတီသည် (၁၈၄၂) ခု ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ရောမမြို့၌ ဆရာတော် သိက္ခာခံယူပြီးနောက် ဘုန်းကြီး (၅)ပါး၊ ဦးပဉ္စင်းကြီး (၂)ပါး၊ ကိုရင် (၅)ပါးနှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရာ (၁၈၄၃) ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ဆိုက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်နှင့် လိုက်ပါလာကြသော ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီး (၅)ပါးမှာ (၁) ဖါသာရ် ဒယ်ပရီနို (Fr. Delprino) (၂) ဖါသာရ် ဂျေဘီပါချီအိုတီ (Fr. J.B.Pacchiotti) (၃) ဖါသာရ် ဖါဒီနာမ်အန်ဒရီနော (Fr.Ferdinand Andreino) (၄) ဖါသာရ် အေဂျီအိုတို (Fr.A.Giotto) နှင့်(၅) ဖါသာရ် အမ်ဘူကာလာ (Fr.M.Buccalla)တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဦးပဉ္စင်းကြီး နှစ်ပါးမှာ ဘရာသာရ် ဂျေပိုဂိုလိုတီ (Bro.J.Pogoloti) နှင့် ဘရာသာရ် ဂါဘူတီ (Bro.V.Gabutti) တို့ ဖြစ်သည်။ ကိုရင် (၅)ပါးမှာ (၁) ဘရာသာရ် ဂျေအာလာဆီယား (Bro.J.Alassia) (၂) ဘရာသာရ် ဖရန်စစ်စကို (Bro.Francisco) (၃) ဘရာသာရ် တက်ဆီအို (Bro.D.Tessio) (၄)ဘရာသာရ် ဘေနေဒစ်အုိုပါတီ (Bro.Benedict Operti)နှင့် (၅) ဘရာသာရ် မော်ရီစီအို (Bro.Moricio)တို့ ဖြစ်သည်။ ဖါသာရ် အန်ဒရီနောသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပြီး အထက် မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ ဖြစ်သည့် နဘက်၊ ချောင်းဦး၊ မုံလှရွာများသို့ လှည့်လည် ကြည့်ရူရသည်။ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီ ပျံတော်မူပြီးနောက် ဖါသာရ် အန်ဒရီနော ချမ်းသာရွာကို အုပ်ချုပ် ရသည်။ ၁
(၁၈၆၀) ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက် ချမ်းသာရွာသို့ အကြည့်အရူ ရောက်ရှိလာသည်။ ချမ်းသာရွာတွင် တောင်ပိုင်းရွာနှင့် မြောက်ပိုင်းရွာ ဟူ၍ တည်ရှိသည်။ ဘုရားကျောင်း မြောက်ဘက် သင်္ချိုင်းနှင့် မြောက်ရွာကြား ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်း ကျယ်ပြန့်သော လယ်ကွင်းကြီး ရှိသည်။ ယင်း လယ်ကွင်း ရရှိရေးအတွက် လယ်ပိုင်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းရာ ကျပ်သုံးရာဖြင့် ရောင်းရန် သဘောတူခဲ့သည်။ ယင်း ငွေသုံးရာကို ဆရာတော်က တ၀က် ဘာသာဝင်များက တ၀က် စိုက်၍ တောင်ရွာနှင့် မြောက်ရွာ ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ကက်သလစ် သင်္ချိုင်းနှင့် ဘုရားကျောင်း အနောက်ဘက်တွင် ရွာနီးချုပ်စပ်မှ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ သေသူများကို မီးရှို့ သင်္ဂြိုလ်သည့် သင်္ချိုင်းကို ဖါသာရ် အန်ဒရီနောက အခြားနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သည်။ ၂ ဖါသာရ် အန်ဒရီနော သည်(၁၈၈၂)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ ပျံတော်မူသည်။
၁။ Bigandet catholic Burmese Mission, PP.33-35
၂။ Bigandet catholic Burmese Mission. PP. 33-35
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၈)